Tsvaga Kuziva Kupfuura Kuburikidza nezivo zvinyorwa
KUSVANYA KUTI URI KUZIVA.
Vol. 6 Nha. 4 - II.
Vol. 6 Nha. 5 - III.
Vol. 6 Nha. 6 - IV.
Vol. 7 Nha. 1 - V.
Vol. 7 Nha. 2 - VI.
Nyika nhatu dzakatenderedza, dzinopinda uye dzinotakura nyika ino yenyama, ndiyo yepasi pasi, uye musungo wehutatu.
Vol. 6 DECEMBER, 1907. Nha. 3
IZVI chinyorwa chinoedza kuratidza kuti ndechipi pfungwa uye hukama hwayo nemuviri wenyama. Icharatidza hukama hwepfungwa hwepamberi kune pasirese mukati uye nezve isu, inoratidza uye inoratidza huchokwadi chaihwo hwenyika husingaverengeki hweruzivo, inoratidza kuti pfungwa inogona sei kugara neiri mariri, uye sei, neruzivo, munhu angave kuziva kweConcciousness.
Vazhinji murume vanozoti anoziva kuti ane muviri, kuti ane hupenyu, zvishuwo, kunzwa, uye kuti ane pfungwa nekuishandisa uye anofunga nayo; asi kana akabvunzwa kuti muviri wake chii chaizvo, chii chinonzi hupenyu, zvishuvo uye zvaari, chii pfungwa, chii pfungwa yake, uye kuti maitirwo emabasa acho aripi kana iye achifunga, haazovimba nemhinduro dzake, sevakawanda vakagadzirira kutaura kuti vanoziva munhu, nzvimbo, chinhu kana chinyorwa, asi kana vachifanira kutaurira zvavanoziva nezvavo uye nemaziviro avakaita, vanozove vasina chokwadi mune zvavanotaura. Kana murume achifanira kutsanangura kuti nyika iripiko munzvimbo dzayo uye seyakazara, sei uye nei pasi richigadzira maruva nemafura, chii chinokonzera mafungu emakungwa, mhepo, moto uye masimba anoitwa nenyika kuita kwayo. mashandiro, chii chinokonzeresa kugoverwa kwerudzi rwevanhu, kusimuka uye kudonha kwenzanga, uye chii chinoita kuti munhu afunge, ipapo ari pakamira, kana kekutanga pfungwa dzake dzakanongedzwa kumibvunzo yakadai.
Munhu wemhuka anouya munyika; Mamiriro ezvinhu nemamiriro ekunze anoteedzera maitiro ake ehupenyu. Paanoramba ari iye mhuka yemhuka, anogutikana kusvika munzira yakapusa nenzira inofara-enda-mhanza. Chero bedzi zvaari kuda iye zvino zvagutsikana, anotora zvinhu zvaanoona asina kubvunza nezvezvinokonzeresa, uye anorarama hupenyu hwakajairika hwemhuka. Panosvika nguva mune rake shanduko paanotanga kushamisika. Anoshamisika pamakomo, pamakadzika, pasi pegungwa, achishamisika pamoto nesimba rawo rinopedza, iye unoshamiswa nedutu, nemhepo, kutinhira, nemheni uye nezvinhu zvinorwisa. Anocherekedza uye anoshamisa panguva dzinochinja, izvo zvinomera zvinokura, uye nekuita maruva, anotishamisazve nenyeredzi dzinopenya, pamwedzi nepazvikamu zvinoshanduka, uye anotarira, nekushamisika pazuva, nekuzvishongedza seanopa chiedza nehupenyu.
Simba rekushamisika rinomushandura kubva kumhuka kuenda kumunhu, nekuti kushamisika ndicho chiratidzo chekutanga chepfungwa inomutsa; asi pfungwa hadzifanire kugara dzichishamisika. Chikamu chechipiri ndechekuedza kunzwisisa uye kushandisa chishamiso. Kana mhuka yemunhu yasvika padanho rino mukushanduka-shanduka, yakatarisa zuva achibuda pamwe nemwaka unochinja, ndokutarisa kufambira mberi kwenguva. Nenzira dzake dzekutarisa, akadzidza kushandisa mwaka maererano necoclic yavo yekudzokorora, uye akabatsirwa mukuedza kwake kuziva nezvisikwa izvo, makumi emakore apfuura, zvakapfuura pachikoro icho chaakanga achipinda. Kutonga nemazvo zvinodzokororwa zviitiko zvechisikigo, izvi ndizvo zvinodaidzwa nevanhu nhasi ruzivo. Ruzivo rwavo rwezvinhu zvakadai nezviitiko zvinoratidzwa uye zvinonzwisiswa zvinoenderana uye nemukati memanzwiro.
Izvo zvakatora zera kuti pfungwa dzivake uye nekudziridza manzwi uye kuwana ruzivo rwepanyama venyama kubudikidza navo; asi mukuwana ruzivo rwenyika pfungwa dzakarasikirwa neruzivo rwega, nekuti mabasa nemawoko akadzidziswa uye nekugadziridzwa uye nemaonero zvekuti haikwanise kuona chero chinhu chisingauyi kuburikidza kana kufadza pfungwa .
Kuziva chaiko, pfungwa dzakajairika dzinomira muhukama humwechete sezvaiita pfungwa yemhuka kumhuka panguva yake. Munhu arikumuka nhasi kune mukana wepasiromukati semhuka yemunhu anomuka kune ayo epanyama. Mukati mezana ramakore rapfuura, pfungwa dzemunhu dzakapfuura nemizhinji nematanho ekuvandudza. Munhu akagutsikana kuberekwa, kuyamwiswa, kufema, kudya nekumwa, kuita bhizinesi, kuroora uye kufa, uine tariro yekudenga, asi iye zvino haana kugutsikana. Anoita zvese izvi sezvaakambozviita uye acharamba achizviita mune zvebudiriro zvichiri kuuya, asi pfungwa dzemunhu dziri muchimiro chekumuka kune chimwe chinhu kunze kwenyaya dzehupenyu hwehupenyu. Pfungwa dzinotamiswa uye dzinoshungurudzwa ne kusagadzikana kunoda chimwe chinhu chinopfuura nemipimo yezvazvinogona kuita ipapo. Izvi chaizvo zvinodiwa chiratidzo chekuti zvinogoneka kuti pfungwa dziite uye kuti uzive zvakawanda kupfuura zvaraiziva. Munhu anozvibvunza kuti iye ndiani uye zvaari.
Achizviwana mune mamwe mamiriro, achikura mune izvi uye achidzidziswa maererano nezvaanoda, anopinda mubhizinesi, asi kana akapfuurira mubhizinesi anoona kuti bhizinesi harizamugutse kunyangwe akabudirira angangodaro. Anoda kubudirira kwakawanda, anohuwana, uye zvakadaro haaguti. Anogona kuda nzanga uye magonyeti, mafaro, zvishuvo uye hupenyu hwehukama, uye angangoda uye asvike chinzvimbo nesimba, asi haasati achigutsikana. Sayenzi yekutsvagisa inogutsa kwenguva nekuti inopindura kubvunzwa kwepfungwa maererano nekuonekwa kwezviitiko uye mimwe yemitemo iripano inodzora zviitiko. Pfungwa inogona kubva yati inoziva, asi painotsvaga kuziva zvinokonzeresa zviitiko, haigutsikane zvakare. Art inobatsira pfungwa mukudzungaira kwayo mukati mezvakasikwa, asi iyo inopera mukusagutsikana kwepfungwa nekuti kana yakanyanya kunaka iyo yakakora, yakaderera inogona kuratidzwa kune pfungwa. Zvitendero zviri pakati pezvinhu zvisingagutsi zvezivo, nekuti kunyangwe musoro wenyaya uri pasi, unosvibiswa nedudziro kuburikidza nemanzwiro, uye kunyangwe vamiririri vechitendero vanotaura nezvezvitendero zvavo kunge zviri pamusoro pemanzwiro, vanopokana nezvavareva nehunyanzvi. iyo inosanganiswa nenzira, uye kuburikidza nemanzwiro. Kwese kwaanenge ari uye mune chero mamiriro ezvinhu aangave, haakwanisi kunzvenga kubvunzwa kumwechete: Zvinorevei izvi - kurwadziwa, kufara, kubudirira, kushushikana, hushamwari, ruvengo, rudo, kutsamwa, kushuva; izvo zvinyengeri, kunyepedzera, kunyepedzera, zvishuvo, zvishuvo? Anogona kunge akawana kubudirira mubhizinesi, dzidzo, chinzvimbo, anogona kunge aine kudzidza kukuru, asi kana akazvibvunza zvaanoziva kubva pane izvo zvaakadzidza, mhinduro yake haina kugutsikana. Kunyangwe angave aine ruzivo rwakakura rwenyika, anoziva kuti haazive izvo pakutanga zvaakafunga kuti aiziva. Nekufunga kuti zvinorevei, iye anoratidza mukana wekupinda mukuzadziswa kweimwe nyika mukati mepanyama. Asi basa iri rinoomeswa nekusaziva kwake kutanga. Izvi hazvifanire kunge zvichishamisika kwenguva refu nekuti kupinda munyika itsva kunoda kuvandudza kwehunyanzvi hunogona kunzwisiswa nenyika nyowani. Dai hunyanzvi uhwu hwakagadzirwa, nyika ingadai ichizivikanwa kare, uye kwete nyowani. Asi sezvo zviri zvitsva uye masimba anodiwa kuti azive kuvapo munyika itsva ndiyo nzira chete yaangaziva nyika itsva, anofanira kuvandudza hunyanzvi uhu. Izvo zvinoitwa nekuedza uye kuedza kushandisa masimba acho. Seidzo pfungwa zvadzakadzidza kuziva nezvepanyama, nekudaro inofanirwa, iyo pfungwa, kudzidza kuziva muviri wayo wemuviri, chimiro chemuviri, hupenyu, uye hwayo masimbiro ehurongwa, semisimboti yakasarudzika, uye seyakasiyana pachayo. Mukuyedza kudzidza kuti chii chiri muviri wenyama, pfungwa dzinozvisarudzira kubva mumuviri uye nokudaro zvinobva zvave nyore kuziva chimiro uye chimiro chemuviri uye icho chikamu icho muviri wenyama chiri kutamba uye chichafanirwa kutora munguva yemberi. . Sezvo ichiramba ichiwana, pfungwa dzinodzidza izvo zvinodzidziswa nemarwadzo uye nemafaro epasi rose kuburikidza nemuviri wenyama, uye nekuzvifunda izvi zvinotanga kudzidza kuzvizivisa kuti zvakaparadzana nomuviri. Asi kwete kusvikira mushure mehupenyu hwakawanda uye mazera akareba izvo zvinoita kuti azvizivise. Paanomuka ku zvidzidzo zvekurwadziwa nemufaro nekusuwa, hutano nechirwere, uye otanga kutarisa mukati memoyo wake, munhu anoona kuti nyika ino, yakanaka uye isingaperi sezvingaite senge, ndiye chete akaomesesa uye akaomarara epasi rese. zviri mukati uye nezvazvo. Sezvaanogoneswa kushandisa pfungwa dzake, anogona kuona uye nekunzwisisa zviri mukati nekukomberedza uyu muviri wenyama nepasi rake, kunyangwe iye achiona nekunzwisisa zvinhu zvepanyama izvo iye zvino zvaano funga kuti anoziva, asi izvo iye sezvaari chaizvo zvishoma of.
Kune nyika nhatu idzo dzinotenderedza, kupinda uye kubereka nyika ino yeyedu, iri yakaderera uye iko kuchema kweaya matatu. Nyika ino yekumiririra inomiririra mhedzisiro yenguva dzakakura sekuverengerwa nefungidziro yenguva, uye inomiririra mhedzisiro yekufungidzirwa kweye nyika dzepasichigare ezviitiko zvezviitiko zvakasarudzika. Izvo zvinhu nemasimba izvo zvino zvinoshanda kuburikidza nepasi rino repanyama ndivo vamiriri veiyo yepakutanga nyika.
Nyika nhatu dzakatangira dzvedu dzirinesu uye dzaizivikanwa kune vekare senge moto, mweya uye mvura, asi mweya wemoto, mvura, uyezve ivhu, hazvisi izvo zvatinoziva mukushandiswa kwazvakarehwa kwemazwi. Ndidzo zvinhu zvemidzimu izvo zviri substrata yechinhu icho chatinoziva nematemu iwayo.
Kuti nyika idzi dzisareruka nzwisiso isu tichaunza zvakare Mufananidzo 30. Inomiririra nyika ina dzatinofanira kutaura, mumamiriro avo ezvinhu uye yekushanduka kwezvinhu, uye inoratidzawo iwo mana mativi kana nheyo dzemunhu, imwe neimwe ichiita munyika yayo, uye yese inoshanda mune yemuviri.
Pane ina, yekutanga uye yepasirese nyika, zvemashiripiti chinhu chaive moto, haisati yambofungidzirwa nezvayo nesainzi yazvino, chikonzero icho chinozoratidzwa mberi. Nyika yekutanga iyi yaive nyika yechinhu chimwe chaive moto, asi yaive nemikana yezvinhu zvese zvakaratidzwa mushure. Chinhu chimwe chemoto hachisi icho laya centre iyo inobvumira kupfuura kwezvinhu zvisingaonekwi, uye iyo yekufambisa iyo yatinoti moto, asi yaive, uye ichiripo, nyika iri kupfuura kwedu kugamuchira fomu kana zvinhu. . Hunhu hwayo kufema uye unomiririrwa nechiratidzo cancer, (♋︎) mukati Mufananidzo 30. Iyo, mweya, yaive nehukasha hwezvinhu zvese uye yakadaidzwa uye inonzi moto nekuti moto ndiyo simba rinofamba mumiviri yese. Asi moto watinotaura nezvake hausi murazvo unopisa kana kuvhenekera nyika yedu.
Mukati merudzi rwemhepo, moto, kana mweya wekufema, wakapinda mukati mawo, uye pakadaidzwa kuti kuve nehupenyu hwenyika, hwakamiririrwa muchiverengero nechiratidzo leo (♌︎), hupenyu, chinhu chemashura icho mweya. Pakanga paine hupenyu hwenyika, hwaro hwomweya, hwakatenderedzwa uye hwakatakurwa nemweya wekufema, iwo unove iwo moto. Hupenyu hwenyika hwaifungidzirwa uye pfungwa dzakafambiswa nesainzi yazvino, kunyange hazvo dzidziso pamusoro pekuti ndeipi hupenyu hwanga husina kugutsa vafundisi. Izvo zvinogona kuitika, zvakadaro, kuti ivo vakarurama mune zvakawanda zvekufungidzira kwavo. Kudzvinyirira, uko kuri kwakazara, kuburikidza nekufema, kunozivisa huviri mune hupenyu hwenyika, uye kuratidzwa uku kuri kwemweya-chinhu. Yemweya-chinhu ndiyo yemidzimu chinhu chemweya muhupenyu hwenyika, leo (♌︎); ndeiya iyo iyo masayendisiti akaita nayo mukufungidzira kwavo uye kwavakadana nzvimbo yeatomiki. Tsanangudzo yesainzi yeatomu rave: chidiki chidiki chinogoneka chechinhu chinogona kupinda mukuumbwa kweganhu kana kutora chikamu mukuita kwemakemikari, ndiko kuti, chikamu chechinhu chisingagoni kupatsanurwa. Iyi tsananguro ichapindurwa nekuratidzwa kwechinhu muhupenyu hwenyika (♌︎), yatakatumidza kuti mweya-chinhu. Iyo, yemweya-chinhu, maatomu, isingaoneki chinhu, hachifanirwe kuongororwa nemweya wepanyama, kunyangwe ichigona kunzwisiswa kuburikidza nekufunga neuyo anogona kuona pfungwa, sekufunga (♐︎) iri kune rimwe divi, rekushanduka iyo ndege iyo iyo yemweya-chinhu, hupenyu (♌︎), irwo rutivi rwekufungidzira, hupenyu hwekufunga ( Mufananidzo 30. Mukuvandudza kwakatevera kwekuyedza kwesainzi uye kufungidzira, zvaifungidzirwa kuti atomu haina kuvonekwa mushure mezvose, nekuti raigona kukamurwa muzvikamu zvakawanda, chikamu chimwe nechimwe chazvo chaigona kupatsanurwa; asi zvese izvi zvinongoratidza kuti nyaya yekuyedza kwavo uye dzidziso yaisava maatomu, asi zvine basa rakawanda pane iyo chaiyo atomu, isingaonekwe. Ichi chinhu chisina kujairika chemweya-chinhu icho chiri nyaya yenyika yehupenyu, chinhu icho chiri chinhu chemashura chinozivikanwa kune vekare semhepo.
Sezvo kutenderera kwekungoenderera mberi, nyika yehupenyu, leo (♌︎), yakarongedza uye ikapisa masisitimu ayo ezvemweya- kana maatomu, uye izvi zvimisikidzo nekumiraira zvino zvave kutaurwa seasvikiro. Iyi astral ndiyo nyika ye fomu, inomiririrwa nechiratidzo virgo (♍︎), fomu. Chimiro, kana nyika yechisumanje ine mafirokuita ekuti, pane, uye mune iyo nyika yakavakirwa. Chinhu chechimiro chenyika imvura, asi kwete mvura iyo iri musanganiswa weviri nhengo dzepanyama dzinonzi ma fizikisi. Iyi nyika yeastral, kana fomu yenyika, irwo nyika iyo, nemasayendisiti, iri kukanganisa yehupenyu hwenyika hweatomu. Iyo, iyo astral fomu yenyika, inoumbwa neyemameroon ezvinhu uye isingaonekwi kune ziso, iro rinopisirwa nemagetsi ekuzungunuka chete; iyo iri mukati, uye inobata pamwechete mafomu ese ayo, mukuumbwa kwavo, anova muviri.
Uye kwekupedzisira tine nyika yedu yepanyama inomiririrwa nechiratidzo libra (♎︎). Chinhu chemashiripiti epasi redu chairo chaizivikanwa kune vekare sepasi; kwete pasi iro isu ratinoziva, asi iyo isingaonekwe ivhu iro rakabatirwa mune yechimwe fomu yenyika, uye chiri chikonzero chekusara pamwe chete kwezvinhu zvezvinhu nekuonekwa kwavo sevhu rinoonekwa. Saka, mune yedu ivhu inooneka yepasi, isu tine, chekutanga nyika yepasi (♎︎), tevere iyo astral fomu (♍︎), zvino zvinhu izvo izvo zvakaverengerwa, izvo ndihwo hupenyu (pul), zvichidhonza kuburikidza nezvose izvi, uye mweya. (♋︎), inova yenyika yemoto uye inosimbisa uye inoita kuti zvinhu zvese zvirambe zvichitenderera.
Mune redu renyika rakatariswa masimba uye zvinhu zvepasirese nyika, uye iropafadzo yedu kuuya muzivo uye nekushandiswa kweizvi kana tichida. Izvo pachayo, iyo yepanyama igumba rinopwanya, mumvuri usina ruvara, kana ichizoonekwa kana kucherechedzwa pachayo, sezvazvinoonekwa mushure mekurwadziwa nekusuwa uye kusuwa pamwe nekuparadzwa kwabvisa kubwinya kwemanzwiro uye kumanikidza pfungwa kuti vaone kusagadzikana kwenyika. Izvi zvinouya kana iyo pfungwa yatsvaga uye yapedza simba vavengi vavo. Izvi zvaenda, uye hapana chekutora nzvimbo, nyika inorasikirwa neruvara rwese nerunako uye ichaita renje, yakaoma renje.
Kana pfungwa dzasvika kune ino mamiriro, uko ruvara rwese rwabuda muhupenyu uye hupenyu pachahwo huchiita sekusina chinangwa kunze kwekugadzira kusuwa, kufa nekukurumidza kunotevera kunze kwekunge chimwe chiitiko chikaitika chinodzikisira pfungwa pachezvayo kana kumutsa icho vamwe vanonzwa tsitsi, kana kuratidza icho chimwe chinangwa mukutambura kwakadaro. Kana izvi zvikaitika, hupenyu hunoshandurwa kubva kune hwekare tsika, uye zvinoenderana nechiedza chitsva chakauya kwazviri, chinodudzira nyika pachayo. Ipapo icho chaive chisina mavara chinotora pamavara matsva uye hupenyu hwunotanga zvakare. Zvese zvinhu nezvose zviri munyika zvine revo yakasiana neyakare. Kune kuzara mune izvo zvaimboita senge zvisina chinhu. Ramangwana rinoratidzika kunge rakabata tarisiro nyowani uye zvibodzwa zvinoratidzika zvinotungamira kuminda mitsva uye yakakwirira minda yekufunga uye chinangwa.
In Mufananidzo 30, iyo nyika nhatu dzinoratidzwa nevarume vadzo vakamira mune yechina uye yakaderera, muviri wenyama, mune chiratidzo libra (♎︎). Iye murume wepanyama we libra, zvepabonde, ari mashoma kune nyika ye virgo-scorpio (♍︎-♏︎), fomu-chishuwo. Kana pfungwa ichizvitakura yega kunge iri yemuviri wenyama nehunhu hwayo, inoedza kupa nyika dzese dzakasiyana-siyana nevarume vayo mumuviri wenyama uye ichiita kuburikidza nemanzwiro ayo, ayo ari iwo maitiro eiyo muviri wake anotungamira munyama. nyika; kuitira kuti inobatanidza masimba ayo ese uye mukana kune wepanyama wepanyika, uye nokudaro unodzima iwo mwenje kubva kumusoro kwepasirese. Hunhu hwepanyama hwemunhu, nokudaro, haadaro, kana kuti haazo, kutora chero chinhu chakakwirira kudarika hupenyu hwayo hwepanyama mune ino yepanyama. Izvo zvinofanirwa kutakurwa zvakanaka mupfungwa kuti tasvika iyo yakaderera nguva yekuiswa mukati meenyama yepanyama nemuviri wepabonde, libra (♎︎), kubva pakutanga kwavakauya kubva kumweya wekufema, kana moto wemunyika, wakatorwa nechiratidzo chegomarara (♋︎), kufema, kubatanidzwa uye kuvakwa mune chiratidzo che leo (♌︎), hupenyu, hwakarongedzwa uye hwakagadzirwa muchiratidzo virgo (♍︎), fomu, uye wakaberekerwa mune chiratidzo libra (♎︎), zvepabonde.
Nyika inopisa yemweya yekufema ndiko kutanga kwekuvandudzwa kwepfungwa mune yakazara zodiac; ndiko kutanga kwehunyonganiso hwemukati wepfungwa hwepamusoro, munhu wemweya, uyo wanga watanga mune zodiac yemweya wemunhu ku Aries (♈︎), akaburukira kuburikidza ne taurus (♉︎) uye gemini (♊︎) kuchiratidzo chegomarara. ♋︎), yeyomweya yemweya, iri mundege yechiratidzo leo (♌︎) yeiyo zodiac chaiyo. Ichi chiratidzo leo (♌︎), hupenyu, hwezodiac chaiyo kenza (♋︎), kufema, kweyezodiac yemweya, uye ndiko kutanga kwekugadziriswa kweiyo zodiac yepfungwa; izvi zvinotanga pane chiratidzo aries (♈︎), chepfungwa zodiac, zvinosanganisira kuburikidza ne taurus (♉︎) kune cancer (♋︎) ye zodiac yepfungwa, ihwo hupenyu, leo (♌︎), ye zodiac yemweya, uye ibvapo yakadzika zasi sign leo (♌︎), yeiyo zodiac yepfungwa, iri mundege ye virgo (♍︎), fomu, yeiyo zodiac yakazara, mundege yekenza (♋︎), yeiyo zodiac yemweya, uye muganho wepiano zodiac sekucherekedzwa neiyo chiratidzo aries (♈︎), yemurume wenyama uye zodiac yake.
Munguva yakapfuura yekare yenhoroondo yevanhu, pfungwa dzemunhu dzakapfekerwa mumuviri wemunhu, dzakagadzirirwa kuitambira; ichiri yakaratidzirwa nechiratidzo chimwe chete, danho, danho rekukura uye rekuzvara, zvekuti inoramba ichidzokazve mudenga. Panguva ino zvakaoma kutevera zvimisikidzo zvinosanganisirwa mune yemunhu wenyama, asi kuenderera mberi kufunga kwevarume vana uye zodiacs yavo mukati meiyo zodiac yakazara, sezvakaratidzwa mune Mufananidzo 30, icharatidza yakawanda yechokwadi chinomiririrwa muchifananidzo.
Shanduko yepfungwa dzemunhu nemiviri iri pano inosanganisirwa mumuviri wake wenyama, yakatanga kubva mumuviri, sezvakaratidzwa nebra (♎︎), zvepabonde, muviri wenyama. Shanduko inoenderera, kutanga kuburikidza nekuchiva, sekucherechedzwa nechiratidzo scorpio (♏︎), chishuwo, chezodiac chaiyo. Izvo zvichaonekwa kuti ichi chiratidzo scorpio (♏︎) yeiyo zodiac yemhedziso, ndiyo inokwanirisa uye kune yakatarisana nerutivi rwechiratidzo virgo (♍︎), fomu. Iyi ndege, virgo-scorpio (♍︎-♏︎), yeiyo zodiac yechokwadi, inopfuura nepamhepo yekufunga-hupenyu, leo-sagittary (♌︎-♐︎), yeiyo zodiac yepfungwa, inova ndege yekenza-capricorn, mweya- somunhu oga (♋︎-- ♑︎), yeiyo psychic zodiac, uyo uri muganho uye muganho wemurume wepanyama uye zodiac yake. Izvo zvinogoneka, nekuda kwekuiswa mukati mechitunha chemuviri unoenderana nemiviri, zvinhu uye nemasimba avo epasirese akasiyana, kuti murume wenyama azvitore semuviri wenyama; chikonzero chekuti afunge uye azvifunge iye semuviri wenyama wekufunga imhaka yekuti musoro wake unobata ndege ye-leo-sagittary (♌︎-♐︎), yehupenyu hwekufunga, yezviratidzo zodiac, uye zvakare ndege ye cancer-capricorn (♋︎-♑︎), kufema-munhu, yeiyo psychic zodiac; asi izvi zvese zvinogumira mundege yefomu-chishuwo, virgo-scorpio (♍︎-,), yeiyo zodiac chaiyo. Nekugona kwake kugona kwepfungwa, murume wenyama anokwanisa, saka, kurarama muchiratidzo scorpio (♏︎), kuchiva uye nekunzwisisa nyika nemafomu enyika, iyo ndege ye virgo (♍︎), fomu, asi achiri kurarama mune ino kusaina uye kuzvidzora iye nemifungo yake kune ndege ye-leo-sagittary (♌︎-♐︎), yenyika yake yepfungwa, kana zodiac, haagoni kuona zvimwe kupfuura mafomu epanyama uye nehupenyu uye kufunga kwepanyika yake yepfungwa sekumiririrwa neiyo kufema uye kusarudzika kwehunhu hwake hwemukati, kuburikidza nemuviri wake wenyama mu libra (♎︎). Uyu ndiye mhuka yemunhu yatataura nezvayo.
Zvino, kana iye mhuka yemhuka zvinyatso, iri muchimiro chepamberi, kana muhupenyu hwakatsetseka, anotanga kushamisika pane chakavanzika chehupenyu uye kufungidzira nezvezvinogona kuitika zveichi chiitiko chaanoona, anenge abvarura ganda renyama yake. zodiac nenyika uye yakawedzera pfungwa dzake kubva kune wepanyama kusvika kune yepamoyo nyika; ipapo kukura kwemurume wake wepfungwa kunotanga. Izvi zvinoratidzwa mune yedu chiratidzo. Iyo yakatarwa ne-aries (♈︎) yemurume wenyama mune zodiac yake, iri mundege yekenza-capricorn (♋︎-♑︎) yemurume wepfungwa, uye leo-sagittary (♌︎-♐︎), yehupenyu hwekufunga, murume wepfungwa. Achiita kubva kune chiratidzo capricorn (♑︎), uyo uri muganho wemurume wenyama, anokwira kumusoro mudenga rezodiac mune psychic nyika uye anopfuura nepakati uye zviratidzo zve aquarius (♒︎), mweya, pisces (♓︎), acha, kuna aries (♈︎), kuziva, mune psychic murume, ari mundege yekenza-capricorn (♋︎ – ♑︎), mweya-wega, wemunhu wepfungwa uye leo-sagittary (♌︎-♐︎), hupenyu hwekufunga, zodiac yemweya. Iyo psychic murume inogona kukura, saka, mukati uye nezvemuviri wemuviri uye anogona, nemafungiro ake uye chiitiko, kupa izvo zvinyorwa uye kuisa hurongwa hwekuenderera mberi kwayo, izvo zvinotanga pane chiratidzo capricorn (♑︎) yeiyo zodiac yepfungwa uye inosvika kumusoro pamusoro pezviratidzo aquarius, mweya, pisces, acha, kuti aries (♈︎), yemunhu wepfungwa uye zodiac yake. Iye zvino ari mundege cancer-capricorn (♋︎-♑︎), mweya-wehumwe, hwezodiac yemweya, inoitawo ndege leo-sagittary (♌︎-♐︎), yehupenyu hwekufunga, yeiyo zodiac yakazara.
Izvo zvinoita kune imwe, kana iye akagadziridza pfungwa yake kune zodiac yepfungwa, kuti mupfungwa ave nehupenyu hwehupenyu uye kufunga kwepasirese. Uyu ndiwo muganho uye muganho mutsetse wemurume wesainzi. Iye anogona kusimuka nekukura kwake kwehungwaru kuenda kune ndege yekufunga kwepasirese, huri humwe humwe hwemunhu wepfungwa, uye fungidzira pamusoro pemweya wekufema uye hupenyu hweimwe ndege. Kana, zvakadaro, murume wepfungwa akasazvidzora nemifungo yake kune yakasarudzika zodiac, asi kana achiedza kusimuka pamusoro payo, anotanga pamuganho wedenga nekusaina kwaanobva, iro riri capricorn (♑︎ ) zodiac yake yemweya, uye amuke kuburikidza nezviratidzo aquarius (♒︎), mweya, pisces (♓︎), achada, kuti aries (♈︎), kuziva, ndiko kukura kwakazara kwemweya mune zodiac yake yemweya, iyo inosvika uye yakasungirirwa neiyo ndege kenza-capricorn (♋︎-♑︎) kufema-munhu, yeiyo zodiac mhedzisiro. Uku ndiko kukura kwekusvika uye kusimudzirwa kwepfungwa kuburikidza nemuviri wenyama. Kana izvi zvasvika, kusafa kwemunhu chinhu chakasimbiswa uye chokwadi; Hazvizombofi zvakare, pasi pechimwe mamiriro ezvinhu kana mamiriro, pfungwa, uyo anenge asvika, haangamboregi kuramba achiziva.
Muchirongwa chekupedzisira pane "Kurara," mazwi ekuti "husina mutsipa nemitsipa" akashandiswa zvisingaite. Tsandanyama dzinoshandiswa panguva yekumuka nekurara dzakangofanana, asi panguva yekurara zvinongedzo zvinokamisa kufamba kwemuviri zvinonyanya kuitika nekuda kwetsitsi yekunzwira tsitsi, nepo mumamiriro ekumuka izvo zvimisikidzo zvinotakurwa chete nenzira yeChebbro-spinal mantha system . Pfungwa iyi inobata zvakanaka kuburikidza neyekunyora rese "Kurara."